Sunday April 15, 2018 - 19:50:42 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya silsilado qaraxyo ah oo ciidamo huwan ah lagula beegsaday deegaanno katirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ayaa sheegaya in qarax xooggan maanta gelinkii dambe lala eegtay gaari Cabdi Bile ah oo ay la socdeen ciidamada Sirdoonka Dowladda Federaalka.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxu uu burburiyay gaariga waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan ciidamadii gaariga la socday.
Dhinaca kale weerar dhabbagal ah ayaa ciidamo isugu jiray AMISOM iyo Mareykan lagula beegsaday duleedka degmada Buula Mareer ee Sh/Hoose, xoogag katirsan Shabaabul Mujaahidiin ayaa wadada ugalay kolonyo ciidamo huwan ah oo ku socdaalayay deegaan ku dhow Buula Mareer, jugta madaafiicda iyo rasaas lays dhaafsanayay ayaa laga maqlayay goobta dagaalka.
Qarax haleelay kolonyo gaadiid ah intii uu dagaalku socday ayaa sababay burbur soo gaariga gaariga, ilo wareedyo ayaa sheegaya in gaariga qaraxu uu beegsaday gaari qafilan oo ay la socdeen ciidamo Caddaan ah.
Ciidamada Americanka ah ee weerarka lagu beegsaday ayaa la sheegay in booqasho indha indheyn ah ay ku tageen saldhigga AMISOM ee Buula Mareer oo bishii lasoo dhaafay uu ka dhacay weerar lagu dilay ugu yaraan 50 askari Yugaandheys ah
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka sida ay baahisay idaacadda Andalus.